Ny iray amin'ireo fanafody raokandro izay manana ny mety indrindra hanatsarana ny fahasalaman'ny vatana amin'ny ankapobeny dia azo avy amin'ny ahitra izay, na dia tsy dia fantatra loatra aza, dia manana tombony be ho an'ny vatana ary mitondra ny anarana hoe Ashwagandha - Now Foods.
Ity dia vokatra misy akora mavitrika izay mahasoa indrindra amin'ny fiasan'ny vatana, ary mety tsara amin'ny fampiroboroboana ny fifandanjana hormonina tsara manerana ny vatana.
Tsy misy isalasalana fa Ashwagandha dia iray amin'ireo zavamaniry mahay indrindra hampiroborobo ny fahasalamana, indrindra rehefa ampiasaina matetika izy io ary anisan'ny fanaonao isan'andro.
Inona ny Ashwagandha - Sakafo Ankehitriny?
Ashwagandha dia ahitra, fantatra indrindra any Atsinanana ary manan-danja tokoa noho ny fanasitranana izay tena ampiasain'ny fanafody Ayurveda any India.
Zavamaniry faran'izay mahazatra ao amin'ny faritra izy io ary efa nampiasaina nandritra ny fotoana ela, na amin'ny endriny vaovao toy ny dite, nefa koa manana toetra ara-pahasalamana ho tena fanafody an-trano.
Famenon-tsakafo miaraka amin'ny ahitra Ashwagandha - Ankehitriny ny sakafo dia mety hahomby amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany amin'ny vatan'olombelona.
Ny iray amin'ireo fampiasana maro azy dia amin'ny maha mpanentana torimaso azy, izay nitaoman'io fananana manokana io aza ny anarany.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny tanjona mifandraika amin'ny fahasahiranana mifandraika amin'ny fihenjanana sy ny fitaintainanana ary koa ireo toe-javatra ratsy isan-karazany vokatry ireo fambara ireo.
Ny firafitry ny simika ao aminy dia manana andiana fitambarana anti-inflammatoire sy antioxidant, izay mahatonga azy ho ahitra tena mandaitra mba hampiroborobo ny fiainana tsara kokoa.
Inona no ilana an'i Ashwagandha?
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana an'io anana io dia mifandray indrindra amin'ny fikarohana hanatsarana ny kalitaon'ny torimaso amin'ny ankapobeny, ahafahana matory haingana kokoa ary hanatsara ny vokatra tsara ateraky ny torimaso mampitsahatra.
Izany vokatra izany dia vokatry ny fitambaran'ny akora simika ao Ashwagandha - Now Foods izay manampy ny vatana hampihena be ny adin-tsaina sy ny tebiteby amin'ny ankapobeny.
Ho fanampin'izay, ny olona mampiasa tsy tapaka an'io fanafody raokandro io dia afaka mifehy haingana ny fifandanjan'ny hormonina ao amin'ny vatana, izany hoe ny ampahany betsaka amin'ny famokarana hormonina dia azo hatsaraina amin'ny fomba voajanahary sy mahasalama tanteraka.
Izy io koa dia manana hetsika mahaliana izay manampy amin'ny fanasitranana havizanana adrenalinina, vokatry ny famokarana betsaka ny kortisol ao anaty ra, izay mampihena ny haavon'ny fihenjanana.
Ny vokatra tsara iray hafa tadiavin'ny olona mampiasa Ashwagandha dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny fahatsapana insuline, izany hoe ireo marary izay diabeta karazana 2 dia afaka mandray soa betsaka amin'ny vokatr'io fanafody raokandro io.
Soa azo avy amin'ny Ashwagandha - Sakafo ankehitriny
Ny ankamaroan'ny vokatra tsara azo amin'ny fampiasana matetika an'io fanafody raokandro io dia mifandraika indrindra amin'ny fanatsarana ny rafitra amin'ny fiasan'ny vatana, satria vokatra miasa amin'ny faritra maro miaraka aminy izy io.
Izany no mahatonga an'i Ashwagandha ho famenon-tsakafo maro samy hafa izay afaka manome tombontsoa ara-pahasalamana tsy mampino ho an'ny vatana, toy ny:
Manampy amin'ny fifehezana glucose;
Mampitombo ny fahatsapana insuline;
Mampihena ny risika amin'ny homamiadana;
Manampy amin'ny fitsaboana ny famoizam-po sy ny aretin-tsaina;
Mampihena ny tebiteby;
Mampihena ny adin-tsaina;
Mampihena ny kortisol amin'ny rà;
Mampiroborobo ny fifandanjana hormonina;
Manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso;
Manamora ny torimaso haingana kokoa.
Ahoana ny fakana an'i Ashwagandha?
Zava-dehibe ny manasongadina fa noho izy io dia fanafody raokandro, Ashwagandha - Now Foods dia tokony hampiasaina tsy tapaka mba hanehoany ny tombony farany azony.
Noho izany dia vokatra mampiroborobo ny vokatra bebe kokoa amin'ny fotoana maharitra.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia nanoro hevitra ny mpanamboatra fa kapsily 1 fotsiny amin'ny vokatra no ampiasaina mandritra ny andro.
Tsy misy poizina amin'ny vatana izy io ary noho io antony io dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana tsy voafaritra izy io nefa tsy misy karazana effets effet effets hafa.
Ashwagandha: Misy vokany ratsy ve ny sakafo?
Raha tadidio fa ity fanafody raokandro ity dia tsy misy afa-tsy fitambarana simika voajanahary ary efa anana efa be mpitia amin'ny fitsaboana Ayurveda izy io, ary tsy misy vokany izany.
Na izany aza, ny famenoana vola betsaka kokoa noho ny tolo-kevitr'ilay mpanamboatra mandritra ny fotoana maharitra dia mety miteraka voka-dratsy toy ny:
Ny voka-dratsy iray hafa mifandraika amin'ny Ashwagandha dia ny fampiasana azy io mety hanelingelina ny fanafody sasany, noho izany dia mila torohevitra ara-pitsaboana ireo olona mihinana fanafody prescription alohan'ny hanapahany hevitra hampiasa ity vokatra ity.
Aiza no hividianana Ashwagandha amin'ny vidiny tsara indrindra?
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa azonao atao ny mividy Ashwagandha - Now Foods amin'ny vidiny mety indrindra dia amin'ny alàlan'ny fivarotana azo antoka izay efa niasa nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fanampin-tsakafo sy ireo vokatra nafarana amin'ny ankapobeny.
Ny fandaniana ny fividianana vokatra tsy sandoka dia fandaniam-bola sy fotoana fotsiny, koa mankanesa any amin'ny tranokala Best Supplement Store ary zahao ny tolotra mahatalanjona nataon'i Ashwagandha.
Ity dia fanafody raokandro tena avo lenta izay mety ho lakilen'ny fanaovana ny fanatsarana ny fahasalaman'ny vatana ho haingana sy maharitra.
Midira amin'ny tranokala fivarotana Supplement tsara indrindra izao amin'ny alàlan'ny CLICKING HERE, ary manome antoka ny Ashwagandha - Now Foods anao.
Aza mandany fotoana, tsapao amin'ny hoditrao ny tombony mahavariana azo omen'ity fanafody raokandro anao ity ary ho hitanao manokana fa afaka mandray anjara betsaka ity vokatra ity mba hahatratrarana haingana kokoa ny tanjonao amin'ny fiainana salama kokoa.
Tags:Ashwagandhatombony ashwagandhaashwagandha mividyashwagandha inona izanyginseng indianawithania somnifera